ESI MEPỤTA BLOG VKONTAKTE - VKONTAKTE - 2019
Ịmepụta blog VKontakte
Ntọala mmekọrịta na Yandex Browser
Yandex.Browser, na-agba ọsọ na nyocha niile a na-ewu ewu (Windows, Android, Linux, Mac, iOS), abụghị otu ma tinyekọrịta mmekọrịta na ndepụta nke ọrụ ya. Iji jiri ya, ịkwesịrị ịwụnye ya na ngwaọrụ ndị ọzọ ma mee ka atụmatụ kwekọrọ na ntọala ahụ.
Nzọụkwụ 1: Mepụta akaụntụ iji mekọrịta
Ọ bụrụ na ịnweghị akaụntụ gị, ọ gaghị ewe oge iji mepụta ya.
Pịa bọtịnụ ahụ "NchNhr"mgbe ahụ okwu "Mmekọrịta"nke ga-amụba obere menu. Site na ya, họta nhọrọ naanị dịnụ. "Chekwa data".
Nbanye na nbanye peeji nke ga-emepe. Pịa "Mepụta akaụntụ".
A ga-ebute gị gaa na Yandex Account Creation peeji nke, nke ga - emeghe ihe ndị a:
Ozi na ngalaba @ yandex.ru;
10 GB na igwe ojii nchekwa;
Mmekọrịta n'etiti ngwaọrụ;
Iji Yandex.Money na ọrụ ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Dejupụta mpaghara ndị a chọrọ ma pịa "Iji debanye aha"Biko rịba ama na mgbe ị debanyere aha, Yandex.Wallet na-emepụta na-akpaghị aka. Ọ bụrụ na ịnweghị ya, kpochie igbe ahụ.
Nzọụkwụ 2: Kwado mmekọrịta
Mgbe ị debanye aha, ị ga-alaghachi na ibe mmekọrịta. Enwere ike ịbanye nbanye, naanị gị ga-edebanye paswọọdụ kpọmkwem n'oge ndebanye aha. Mgbe ịbanye na pịa "Kwado mmekọrịta":
Ọrụ ahụ ga-enye gị ịwụnye Yandex.Disk, nke uru ya na-ede na window n'onwe ya. Họrọ "Mechie windo"ma ọ bụ"Wụnye Diski"n'echiche gị.
Nzọụkwụ 3: Debe mmekọrịta
Mgbe ọganihu nke ọrụ na "NchNhr" a ga-egosipụta ọkwa "Naanị usoro a"yana nkọwa nke usoro ahụ n'onwe ya.
Site na ndabara, ihe niile ejirila mekọrịta, ma wepu ụfọdụ ihe, pịa "Hazie mmekọrịta".
Na ngọngọ "Ihe ịmekọrịta" Chọpụta ihe ịchọrọ ịhapụ na kọmputa a.
I nwekwara ike iji otu njikọ abụọ n'oge ọ bụla:
"Mmekọrịta mmekọrịta" kwụsịtụ ọrụ ya ruo mgbe ị ga - amaliteghachi ọrụ ọzọ (Nzọụkwụ 2).
"Hichapụ data synchronized" ehichapụ ihe edobere na Yandex igwe ojii. Nke a dị mkpa, dịka ọmụmaatụ, mgbe ị gbanwere ọnọdụ nke ndepụta nke data synchronized (dịka ọmụmaatụ, gbanyụọ mmekọrịta "Akwụkwọ edokwubara").
Lelee taabụ synced
Ọtụtụ ndị ọrụ nwere mmasị dị iche iche na taabụ ọrụ n'etiti ngwaọrụ ha. Ọ bụrụ na ha gụnyere na ọnọdụ mbụ, ọ pụtaghị na ihe niile na-emepe emepe n'otu ngwaọrụ ga-emeghe na nke ọzọ. Iji lee ha na ị ga-aga na ngalaba pụrụ iche nke desktọọpụ ma ọ bụ ihe nchọgharị mkpanaka.
Lee taabụ na kọmputa
Na Yandex Browser maka kọmputa, ịnweta ịchọta taabụ anaghị emetụta ya n'ụzọ kachasị adaba.
Ị ga-abanye na nkwụnye ihe nkesanchọgharị: // ngwaọrụ-taabụma pịa Tinyeịbanye na listi na-agba ọsọ na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Ịnwekwara ike ịbanye na mpaghara a nke menu, dịka ọmụmaatụ, si "Ntọala"site n'ịgbanwe ihe "Ngwa ndị ọzọ" na nkpu n'elu.
N'ebe a, buru ụzọ họrọ ngwaọrụ nke ịchọrọ inweta ndepụta nke taabụ. Ntube ihuenyo na-egosi na ọ bụ naanị otu smartphone ka ejikọtara, ma ọ bụrụ na enwere mmekọrịta maka ngwaọrụ 3 ma ọ bụ karịa, ndepụta dị n'aka ekpe ga-aba. Họrọ nhọrọ a chọrọ ma pịa ya.
N'aka aka nri ị ga-ahụ ọ bụghị naanị ndepụta nke ugbu a na-emeghe taabụ, kamakwa ihe echekwara "Akara". Na taabụ i nwere ike ime ihe niile ị chọrọ - gafee ha, gbakwunye na ibe edokọbara, detuo URLs, wdg.
Lee taabụ na ngwaọrụ mkpanaka gị
N'ezie, enwere mmekọrịta na-agbanwe na ụdị nlele ihuenyo meghere na ngwaọrụ synchronized site na smartphone ma ọ bụ mbadamba. N'ọnọdụ anyị, nke a ga-abụ igwe gam akporo.
Meghee Yandex Nchọgharị wee pịa bọtịnụ ahụ na ọnụ ọgụgụ taabụ.
N'okpuru ala, họta bọtịnụ dị n'etiti dị ka nyocha kọmputa.
A ga-emepe windo ebe a ga-egosipụta ngwaọrụ ndịkọrịta. Anyị nwere naanị nke a "Kọmputa".
Kpatụ ya na aha ngwaọrụ ahụ, si otú ahụ gbasaa ndepụta nke taabụ emeghe. Ugbu a ị nwere ike iji ya na nke gị.
Iji mmekọrịta site na Yandex, ịnwere ike iweghachite nchọgharị ahụ n'ụzọ dị mfe ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu, ebe ị maara na ọ nweghị data gị ga-efu. Ị ga-enwekwa ike ịnweta ozi mmekọrịta site na ngwaọrụ ọ bụla ebe Yandex.Browser na Intanet dị.